कलियुगका कुरा: July 2012
उपचार राम्रो हुँदा पनि पिटाई
दाङको सरकारी अस्पतालमा आठ/दश जना युवाले एकजना गम्भीर अवस्थाकी सुत्केरीलाई लिएर गएछन्। सुत्केरी र युवाहरुको अवस्था देखेपछि त्यहाँका डाक्टरले आफूले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै नेपालगञ्जतिर लाने सल्लाह दिएछन्। युवाहरु आक्रोशित हुँदै परसम्म पुर्याउँदा अवस्था झन् नराम्रो हुन्छ भनेर, 'तुरुन्त उपचार गर्' भन्दै डाकटरलाई थप्पड हानेछन्।
डराई डराई डाक्टरले उपचार गरेछन्। सबै कुरा राम्रो भएछ। डाक्टर अलिक ढुक्क भएछन् तर हस्पिटलबाट निस्कने बेलामा फेरि डाक्टरलाई युवाहरुले कुटेछन्, 'आँफैले सक्ने भई-भई किन अन्त रिफर गर्याथिस्?' भन्दै। विरामी उपचार अससफल हँदा डाक्टरले पिटाई खाएको त सुनेको हो। तर उपचार सफल हुँदा पनि पिटाई खाएको चाहिँ पहिलोपटक सुनियो।
सुरुमै आश मार्दिने पुलिस
‎'कुनै दम्पतिको चार जना केटाकेटी मध्ये एक जनाले भान्सामा राखेको स्याउ चोरेर खाए त उसले नभनेसम्म त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकिदैंन भने महानगरको कुनै निर्जन स्थानमा रातको समयमा संगठित र सुनियोजित तरिकाले गरिएको अपराध पत्ता लगाउन कति सहज होला?' काठमाडौंमा अपराध हुन नदिने र भए नि पत्ता लाउने जिम्मा पाको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, हनुमानढोकामा टाँसिएको यो सूचना देखेर प्रहरीमा उजुरी गर्न ग'का कोहीकोही उजुरी नै नगरी फर्केका छन् कि छैनन् होला ? सुरुमै अपराधी पत्ता लाग्ने आशा मार्दिने रछ पो पुलिसले। (Photo: Rabindra Singh Baniya)
तिर गलत ठाउँमा
हुन त उनीहरु एकदुईटा बोर्डिङमा तोडफोड र तिनका बस जलाएपछि अरुलाई तर्साएर चन्दा माग्ने सुरमा होलान् तर पनि यसो सोचेर ल्याउँदा यो ड्यास क्रान्तिकारी विद्यार्थीको तिर यसपटक ठीक ठाउँमा लागेन। उच्च माध्यमिक विद्यालयमाथि आक्रमणको साटो, अहिले तिनले भुपूहरुलाई घर, गाडी, कर्मचारी सुविधा दिने अध्यादेशविरुद्ध तिर सोझ्याएको भए निशाना ठीक ठाउँमा लाग्छहोला। आफू त सर्वजन हिताय वाला परियो, तिनकै भलाईका लागि भन्दिया हो...
जोशीले किताब बेचेरै ३१ लाख कमाए रे
गोविन्दराज जोशीले सम्पति विबरण बुझाउँदा किताबबाट ३० लाख ८७ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको भन्यारहेछन्। यिनको कुरा पत्याउने हो भने त नेपाली भाषामा लेखेरै मात्र सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा यिनै पर्नेरहेछन् कि के हो? अख्तियारले पनि हिसाब गर्न झ्याउ मानेर होला २ लाख रुपैयाँ सम्म किताब बेचेर कमाए होलान् भन्दिएछ। जोशीले किताब बेचेर धेरै कमाको भए २० हजार होला। दुई लाख पनि म त पत्याउँदिन।
नयाँ किनेको गाडी पुरानो परेछ
कति माइक्राँ हिड्ने आफ्नो मात्र कुरा गर्ने कहिलेकाहीँ गाडीवालाहरुको पनि कुरा गर्दिउँ न त। 'अफर' ला'को बेला सोरुममा गएर नयाँ हुन्डाईको I 20 भन्ने गाडी किनेछन् बिकु नारायण चौकामीले। दुई/तीन महिना चलाएपछि थाहा पाएछन्, गाडी त डेन्टिङ/पेन्टिङ गरेर नयाँ बनाएको रहेछ, आजको अँग्रेजी पत्रिका रिपब्लिकामा समाचार छ । संसारकै 'सोझा जाति' नेपाली; किन्न मात्र होइन बेच्ने पनि...
ट्राफिकको जरिवाना किन GLOBAL IME मा?
पुराना, ठूला अनि सरकारी थुप्रा बैंक हुँदाहुँदै पनि ट्राफिकले जरिवाना तिर्नलागि भक्तपुर जिल्लामा शाखै नभएको GLOBAL IME बैक किन छानेहोलान् भन्ने त लागिरहेकै थियो। आज बल्ल थाहा पाइयो। त्यो बैकका सञ्चालक, ट्राफिक जरिवानाको पैसा कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीका छोरीज्वाईं रहेछन् अनि बैंक सञ्चालक पनि निर्णय गर्ने पनि माउवादी निकट पनि हुन् रे।
भन्नेको सुरमा लाग्दा प्रचण्ड
अब भाको एउटा छोराले छाडेर हिडिगएँ। सरकारले उपहार दे'को गाडी र अनेक उपाए लगा'र ले'को लाजिम्पाटको घर नि छाडेर साधारण घरमा सर्ने हुनुभ'छ। केही गरे सुख छैन प्रचण्ड जी, कस्तो नुबझेको तपाईंले। तपाइले जापानी गाडी प्राडो सरकारलाई फिर्ता दिएर भारतीय स्कोर्पियो वा बोलेरो चढेर हिडें नि तपाईलाई अब फेरि विरोधीहरुले भन्नेछन् 'देख्यौ! भारतको अगाडि कतिसम्म नतमस्तक भने गाडी पनि भारतीय चढ्यो।'
फिर्ता पठाउनुपर्ने अध्यादेश पठाउनु छैन
आँफू चाहिँ बहालवाला हुँदा 'मुस्ताङ' चढ्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्व भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई प्राडो/पजेरो, घर, पिए सुविधा गरी एकै महिनामै ५० औं लाख राज्यबाट दिने कानून बनाइसके। एकदेखि तीन महिना मात्र मन्त्री भएकाले मात्र होइन एकपटक न्यायाधीश भएकाले नि त्यो सहुलियत पाउनेछन्। पूर्ण बजेट अध्यादेशबाट स्वीकृत गर्न सबै दलको सहमति चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि पूर्वहरुलाई सुविधा दिने अध्यादेश पारित गर्न कसैको सहमति चाहिँदो रहेनछ। बारम्बार अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन भन्ने राष्ट्रपतिले कम्तीमा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई सुबिधा दिने अध्यादेश फिर्ता पठाइदिन सके बल्ल पो बोलेको कुरा गतिलो हुन्थ्यो।
गोलीबाट मुक्का र कुर्चीमा झरेको पो
‎'पहिले गोली पो हान्ने हुम् त, अहिले मुक्का र कुर्ची मात्रै हानाहान गर्दा किन आत्तिएको' माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रम बाबुराम भट्टराईमाथि नै ठूला साना नेता/कार्यकर्ताको हात बजारियो रे नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा विस्तारित बैठकमा सहभागी हुन आएका एक माओवादी कार्यकर्ताले दिएको जवाफ।
पूर्वहरु भिसा नलिइकन विदेश
अस्ति नै पूर्व नहुँदै मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट भिसा नलिइकन जर्मनी उड्दा (युएई)को राजधानी अबुधाबीको एयरपोर्टमा एक दिन बसेका थिए। अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि दोहामा दुई दिन बस्ने योजना बनाएर फ्रान्स जाँदा पनि फेरि भिसा नलिइकन कतार पुगेछन्। के विघ्न ह्याउ बढेको हो नेपालीको... भिसा नलिइ/नलिइकन विदेश जान आँट भएका?
नेपालमा जहाँ रोड राम्रो त्यहाँ धेरै दुर्घटना
'साझा सवाल' मा देशमा सडक दुर्घटना किन बढेको भनेर कार्यक्रम गरेको। एकजना विश्लेषकले भने, 'हाम्रोमा जहाँ जहाँ पक्की र राम्रो रोड छ त्यहाँ त्यहाँ दुर्घटना धेरै भएको रेकर्ड मैले अनुसन्धानबाट पाएँ।' सरकारलाई यस्तो विश्लेषण सुनाउँदा रहेछन् र पो हाम्रो रोडको गति यस्तो हुँदोरहेछ।
'हाइवे' नहेरे त सोसाइटीमा परिन्न जस्तो भो
कोही कोही साथीहरुले आफू पनि तीन सेकेन्ड देखिएको फिलिम भनेर यसले प्रचारका लागि यस्तो लेख्यो भनेर आरोप नि लगाउलान्। तर सत्य कुरा के भो भने, यो 'हाइवे' भन्ने फिलिमको यति साह्रै प्रचार गरे कि त्यो हेरिएन भने त 'सोसाइटी'मा नपरिएला पो भन्ने डर भो।
पार्टीको नाम विदेशी राखे हुन्छ?
मन थाम्नै नसकेर कार्टुनिस्ट राजेश केसीको कार्टुन उनको फेसबुक वालबाट चोरेर यता आफ्नो ब्लगमा ल्याइयो। कलेजको नाम पो विदेशी राख्यो भने विद्यार्थीले तोडफोड गर्दिन्छन्। पार्टीको नाम विदेशी राख्दा कसले तोडफोड गर्ने? पार्टीको नामहरु कि छ नेपाली Congress, नेपाल Communist पार्टी Marxist, Leninist, Maoist, मधेशी जनअधिकार Forum।
त्यसैले कलेजको नाम हो विदेशी राख्न नपाइने पार्टीको नाम त विदेशी राख्न भइहाल्छ नि....
ड्यास माओवादीले काम सुरु गरे
ए! नयाँ ड्यास माउवादीले काम सुरु गरेछन्। तिनका क्रान्तिकारी विद्यार्थीले रातो बंगाला स्कूलको बसका चालकलाई ओरालेर बिहानै पाटनढोकमा आगो लगाइदिएछन्। प्रहरीले आगो लगाएको भन्दै छ जना नयाँ क्रान्तिकारी विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको छ भन्ने समाचार एफएमले दिए। देशमा को भन्दा को बढी क्रान्तिकारी देखिने होड जो चलेको छ।
अब तिनको रिहाईको माग गर्दै नयाँ माओवादीले आन्दोलन गर्ने होला। सरकारले रिहाई नगर्ने होला, अनि द्वन्द्व बढ्दै जाने होला। कोही भुमिगत हुने होला अनि के के हुँदै जाने हो? अबको हुनु हुनामी हेर्दै जाने भन्दा के गर्न सकिन्छ र...
सहमति चुनावका लागि
बाबुराम भट्टराईको राजिनामा माग्नेहरुले बुझुन् उनको राजिनामाले देशले कुनै निकास पाउँदैन। भट्टराईले राजिनामा दिदैंमा सहमति हुने कुरा पनि छैन र सहमति भएपछि मात्र भट्टराईले राजिनामा दिने भन्ने एकिकृत माओवादी कुरा पनि जालीबाहेक अर्को हैन। कारण संविधानसभाको बिबादित विषय 'एकल जातीय पहिचानको प्रदेश'मा दलहरुबीच सहमति हुने छैन र एकिकृत माओवादी सँधै सहमति भएको छैन भनेर सत्तामा बसिरहन पाउँदैन। त्यसैले अब सहमति अरु कुरामा होइन चैतमा नयाँ निर्वाचनका लागि हुनुपर्छ र दलहरुले चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ। चुनावी सरकार सहमतिमा प्रमुख दलहरु मिलेर बनाए अति राम्रो अन्यथा विशेषज्ञहरु सम्मिलित सरकार गठन गरिनुपर्छ।
सहमती हुनासाथ राजिनामा दिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'चुनावबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नआएसम्म मै प्रधानमन्त्री' भन्न ब्राजिल पुगेर भारतीय प्रम मनमोहन सिंहलाई भेट्नुपरेको थियो। संविधानसभा पुनस्थापना गर्न बाबुरामलाई ढाल्न तयार प्रचण्डले त्यही कुरा 'प्रम भट्टराईको राजिनामा आउन्न' भन्न भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलाई भेटेपछि पुग्यो। (एउटा मान्छेको मायाँले कति फरक पार्दछ नेपालको राजनीतिमा...) तर कोही नआत्तिए हुन्छ संसार परिवर्तनशील छ। यस्ता कुराहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ।
कतिलाई चिनेर सक्नु?
अस्ति नै काँग्रेसकी महिला सभासद कल्याणी रिजाललाई नचिन्दा बागबजारका कुर्ता पसलेले हिरासतको हावा खान पुगे। केही समय अगाडि हेल्मेट नलाइकन मोटरसाइकल चलाएका एमाले कार्यकर्ता नचिन्दा दाङका ट्राफिक प्रहरीको जागिर मुश्किलले बच्यो। अहिले प्रहरीकी डीआईजी पार्वती थापालाई नचिन्दा महिला प्रहरीले काठमाडौं एयरपोर्टमा दुई चड्कन भेटिछन्।
यो देशमा तपाईहरु कतिलाई चिन्नुपर्ने हो कृपया आफ्नो नाम ठेगाना पद लेखेको एउटा बायोडाटा घाँटीमा झुण्डाएर हिड्नुहोस्न नत्र हामी धेरैले तपाइहरुलाई नचिन्दा बेकारको दुःख पाइने भो।
कोही मान्छे विदेशबाट फर्केछ भनेर कसरी जान्ने
प्रश्न: कोही पनि नेपाली विदेश मतलब मुख्य गरी युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया सरहका देश गएर आ'को भनेर ५ मिनेट भित्रै कसरी थाहा पाउने ?
उत्तर : फुर्सद भए एकछिन फेसबुकको भित्तो हेरे हुन्छ नत्र कुनै बिहे भोज होस् कि माइक्रो वा गोष्ठी जहाँ भेटेर पाँच मिनेटसम्म उसको गफ सुन्नोस्। उसले कहीँ न कही, केही न उताको केही जोडेर भनिहाल्छ।(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा.... )
सोसाइटीमा पर्न पनि हेर्नै पर्ने भो
कोही कोही साथीहरुले आफू पनि तीन सेकेन्ड देखिएको फिलिम भनेर यसले प्रचारका लागि यस्तो लेख्यो भनेर आरोप नि लगाउलान्। तर सत्य कुरा के भो भने, यो 'हाइवे' भन्ने फिलिमको यति साह्रै प्रचार गरे कि त्यो हेरिएन भने त 'सोसाइटी'मा नपरिएला पो भन्ने डर छ।
ठगी चलिरहेकै छ
अगिल्लो स्टाटसमा +2 का विदेशी नाममा व्यङ्य गर्यो भनेर होला आज फेरि अर्का एकजनाले सुनाए कतिपय +2 ले कक्षा ११ मा स्कूलरसिप दिन्छौं भनेर विद्यार्थी भर्ना गर्छन् रे अनि कक्षा १२ मा पुगेपछि दुई वर्षकै फिस लिइदिएर ढाड सेक्छन् रे। अनि कोही कोही चलाख विद्यार्थी ११ एयरकन्डिसनवालामा पढे पनि १२ कक्षा पढ्न सरकारी उच्च माविमा जाने रहेछन्। ठगी चलिरहेकै छ, उही कसले कसलाई ठग्ने भन्ने प्रतिश्पर्धा मात्र हो....
कलेजका विदेशी नाम
चेल्सी र लिभरपुल बीचको फुटबल दशरथ रंगशालामा' भन्ने समाचार देखेर एकजना साथीले ओहो खतरै हुनेभएछ भनेर सोचेछन्। तर समाचार पढ्दै गाको त नेपाली +2 कलेजहरु बीचको फुटबल पो रहेछ। यी अँग्रेजी नाम भाकोमा पढ्नेलाई सिधै ती देश र शहरका भिसा दिने त होइन होला, किन हो कुन्नि धेरै कलेजले विदेशी नाम राखेका?
ज्ञानेन्द्र बोल्दैमा के बिग्रियो
अदालतले कानून नभएकाले सुविधा नदिनु भनेपछि क्याबिनेटबाट निर्णयै गराएरै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्वसभामुखलाई र अदालतले सुविधा फेरि नरोकोस् भनेर पूर्व न्यायाधीसहरुलाई समेत गाडी, सचिवालय गरी ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको सुविधा थप्दै थप्दै गएका बाबुरामले पूर्व राजाको चाहिँ सुविधा खोस्दिन्छु भनेर धम्की दिएछन्। अब पूर्व प्रधानमन्त्री/मन्त्री त बाबुराम पनि हुने भइहाले तिनलाई सुविधा दिनपर्‍यो। पूर्व राजा त आफू हुन सकिन्न भनेर हो कि के हो सुविधा खोस्ने भनेको... ज्ञानेन्द्र बोल्दैमा के बिग्रियो। जति धेरै बोल्यो उति नाङ्गिदै जाने न हो नेपालमा जो पनि।
जनजाति पार्टी खोले पनि छिट्टै फुट्ला
असाध्यै शंकालु बनाइदिदो रहेछ यो पत्रकारिता पेशाले। अहिले बाहुनको नेतृत्व मानिन्न भनेर जनजाति पार्टी खोल्न तम्सिएकाहरु भोलिपर्सी फेरि आँफआँफै भित्र एकथरीले गुरुङको नेतृत्व मान्दैनम्, अर्काथरीले थारुको नेतृत्व मान्दैनम् भन्ने, कसैले नेवार र बाहुन उस्तै रहेछन् नेवारको नेतृत्व हामी लिम्बु र मगरले किन मान्ने, हामी थकालीले बाहुनको नेतृत्व त मानिएन अब राईको नेतृत्व कहाँ मानिन्छ भनेर नयाँ पार्टी खोलिहाले पनि छिट्टै फोड्छन् झैं लाइराछ। यस्तै यस्तै नचाहिने कुरो मनमा खेलेर हैरानै पार्छ मलाई त कहिलेकाहीँ...
कतै चुनाव हुनेभयो भने मुन्छेहरुले घर/पर्खालको भित्तैमा पनि नेताहरुलाई गाली गरेका 'प्रवेश निषेध'का सूचना टाँस्ने पो हुन् कि के हो? फेसबुकका भित्ताँ मात्र होइन, गाडीको नितम्बमा (नितम्बको अर्थ बुझ्न तल हेर्नुहोला) नि नेताहरुलाई गाली गर्ने चलन बढ्या देख्दा मनमा ला'को कुरा नि।
कि पूर्व राजा झुठो बोले कि माधव नेपाल र कृष्ण सिटौला
पूर्व राजा दुई/चार जिल्ला घुम्न जाँदैमा र एक/दुईटा अन्तरवार्ता दिदैंमा राजा फर्कनेभए भन्नेहरु बढ्न थाल्यारछन् शहरमा। आँफै कल्पनामा रमाउन त कसैले छेक्दैन तर राजा न नेपाली जनताको मात्र चाहना र बलले फालिएका हुन् न यहाँका केहीले चाहदैँमा फर्कन्छन्। तर यहाँ कुरो त झुट्टा बोलेको पो आयो त। पूर्व राजा भन्छन् - २०६३ साल बैशाख ११ गते संसद पुनस्थापना गर्दा सात दलहरुसँग संवैधानिक राजसंस्था राख्ने सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता आफू वा अरु कसैसँग अझै पनि सुरक्षित छ। (भनेपछि पक्कै लिखत हुनपरो कि भ्वाइस रेकर्डड)
एमाले नेता माधव नेपाल भन्छन् - त्यतिबेला पूर्व राजासँग त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको थिएन, यो आधिकारिक रुपमा मैले भनिरहेको छु, यदि त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको थियो भने ल्याए हुन्छ।
यहाँ कि राजा कि माधव नेपाल र नेपालसँग बोली मिलाउने कृष्णप्रसाद सिटौला झुठो बोलेकै छन्। हामी स्कूल पढ्दा बोलेको कुरा झुठो ठहरिए कुखुरा बनेर एकछिन घाममा सेकिनपर्थ्यो। अब राजाले आफूसँग प्रमाण भए पेश गरौं माधव नेपाल र कृष्ण सिटौलालाई कुखुरा बनाउँला नत्र पूर्व मौसुफ नि कुखुरा बन्न तयार हुने कि भनेर भन्न नि मिलेन, ठूलो हुँदै गएपछि झुठ बोल्न पनि छुट हुँदै जानेरहेछ।
सरकारी कार्यलय कि भगवानको फोटो बेच्ने ठाउँ
काम छ भने त दिक्कै हुन सक्छ तर काम छैन भने नेपालका सरकारी कार्यालय घुम्न रमाइलै हुन्छ। एउटा सरकारी कार्यालयको दर्ता चलानी (रिसेप्सन) शाखा। देश धर्म निरपेक्ष भनेर के गर्नु यहाँ दर्ता भएका चिठ्ठी भगुमान् कै खोपीमा पुग्ने झैं गरी फोटा टाँसेका छन्...
हरिवंश र धराबासीको बिहेले उत्साह थप्यो
श्रीमती बितेदेखि नै शोकमा डुबेर ११ वर्ष विधुर बसेका गाउँले काकाले फोन गरेका छन् - बिहे गर्न महिला खोजेर सहयोग गर्न सक्लास् केटा ? हरिवंश आचार्य र कृष्ण धराबासीको बिहेको खवरले उत्साह थप्यो होला।
कमनिस्ट नेतालाई सेतो कपालको पिर
हैन! कमनिस्ट नेताहरुलाई अझ त्यसमाथि पनि एकिकृत माओवादी नेतालाई सेतो कपालको कति पिर हो ? माउवादी नेता लेखराज भट्टपछि पार्टी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले नि कपाल रातै रङ्गाएछन्। घरको टिभी बिग्रेर कपाल रातो देखिएको हैन होला त...
प्रहरी व्युख्याँचा ?
सामाखुशी नजिकको खेतमा यो फोटो देखेदेखि मनमा एउटा कुरा खेलिराछ। प्रहरी पोशाकलाई वुख्याँचा बनाएर यिनले मान्छेलाई तर्साएको कि, चराचुरुङ्गी, जनावरलाई तर्साएको कि प्रहरीहरु वास्तवमा वुख्याँचा जस्तै भए भनेर प्रहरीलाई व्यङ्ग्य गरेको ?
सामान जति सब चिनीयाँ औपनिवेशवाद भारतको
ड्यास माउवादी कमरेडहरुले साह्रै भारतीय औपनिवेशवादको कुरा गरेपछि यसो आफूले प्रयोग गर्ने सामान हेरेको जीउ ढाक्ने कपडादेखि, बिहान उठेपछि गर्ने बुरुस, भान्साका राइसकुकुर, थर्मस, लसुन होस् कि अन्य कोठाका टिभी, फोन कार्यालयका कुर्ची, सोफा अनि राति सुत्ने ओछ्यान, ब्लाके‌ट, बोक्ने झोला, मोबाइल सबका सब चिनियाँ सामान पो रहेछन् त हउ। राजनीतिमा भारतीय औपनिवेश भए पनि आर्थिक औपनिवेश चिनतिर छ कि के हो कामरेड!
गएको साता शुक्रबार दिउसो २ बजे कपनबाट नयाँबसपार्क आइपुगेको माइक्रोबसमा तपाईँले चिनेका कोही थिएनन् होला। मेरा भने कलेजका दुई साथी नारायण शर्मा र हरिकुमार ढकाल थिए।
शंकरदेव क्याम्पसमा बिबिएस पढ्दै गरेका हामी तीनमा धेरै कुरा मिल्दैन होला। तर चार कुरा भने एउटै रहेछ। उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं पढ्न आएका, साँझमा ठमेल कहिल्यै नघुमेका र अर्काको आम्दानीमा बाँचिरहेका। अनि काठमाडौ‍मा बाँच्नका लागि केही तत्काल सुरु गर्न पर्यो भन्ने हुटहुटी भएका।